Home Wararka Waa maxay sababta RW Rooble looga reebay shirka D. Goboleedka ee Garowe?
Waa maxay sababta RW Rooble looga reebay shirka D. Goboleedka ee Garowe?
Qoraal xalay ka soo baxay shir ay qadka ZOOM-ka kuwada yeesheen madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa lagu sheegay in madaxda dowlad goboleedyada ay shir deg deg ah oo wadatashi ah isugu yimaadaan magalaada Garowe Bishaan 21-23keeda.
Kulankaan ayaa ah mid u gaar ah dowlad goboleedyada oo kali ah, waxaana gabi ahaanba meesha laga saaray ka soo qaybgalka Ra’iisal Wasaare Rooble oo markiisii hore taageero buuxda ka haystay dowlad Goboleedyada.
Dhanka kale, warmurtiyeedka xalay ka soo baxay shirka dowlad goboleedyada ayaa ahaa mid aan lagu taageerin mowqifka uu RW Rooble ka qaatay qoraalkii ka soo baxay xafiiska Madaxweyne Farmaajo. Waxa ay ku baaqeen in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka ka jira labada dhinac.
Talaabooyinkaan isdaba yaala ee ay qaadeen dowlad goboleedyada ayaa u muuqda kuwa muujinaya in Dowlad Goboleedyadu ay ka leexdeen wadada uu RW Rooble ku socday, isla markaana ay dowlad goboleedyadu iska fogaynayaan go’aanada uu qaatay RW Rooble.
Waxaa jira warar sheegaya in qaar kamida madaxda dowlad goboleedyada ay u arkaan wadada uu qaaday RW Rooble mid ka baxsan arimihii horay loogu heshiiyay. Waxa kale oo jira dareen ah in madxada dowlad goboleedyadu u arkaan Rooble in uu noqday nin gacanta u galay qaar kamida mucaraadka, kuna shaqeeya ajendaha mucaaradka iyo wadamo shisheeye.
Si kastaaba ha noqotee, waa ay adkaan doontaa in RW Rooble uu dagaalkiisa ka dhanka ah Farmaajo sii wado hadii uusan haysanin taageerada Madaxda Dowlad Goboleeyada.